Weedhihii Kaftanka Iyo Qosolka Xambaarsanaa Ee Laga Guntay Ruug-cadaagii Saxaafadda Marxuum Axmed Xasan Cawke Iyo Soo Ururintii Yuusuf Garaad. |
Weedhihii Kaftanka Iyo Qosolka Xambaarsanaa Ee Laga Guntay Ruug-cadaagii Saxaafadda Marxuum Axmed Xasan Cawke Iyo Soo Ururintii Yuusuf Garaad.
Hargeysa-(GNN)- Yuusuf Garaad Cumar Axmed, oo ay muddo soo wada shaqeeyeen Allah ha u naxariistee ruug-cadaagii weynaa ee saxaafadda Mrxuum Axmed Xasan Cawke. oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee Ethiopia, laguna aasay magaaladii uu ku dhashay ee Togwajaale, badhtamihii bishii November, ee Sannadkan dhammaadka ah ee 2015-ka, ayaa qoraal kooban oo uu ku faafiyey Mareeg uu ku leeyahay Internet-ka Waxa uu ku soo bandhigay Qisooyin kooban oo uu ka urruuriyey Marxuun Cawke, waxaanu ujeedadda qormada qoraalkiisan uu ku sheegay in Weriye Cawke bulshadu uga baratay Barnaamijyo madadaalo ah inuu Sameeyo mar kasta oo Sanad Curanayo.
Inkasta oo weedhihii kaftanka iyo qosolka ahaa ww Maxuum Axmed Xasan Cawke, aan lagu soo koobi karayn, qormo kaliya, waxa uu Yuusuf Garaad ku bilaabay qoriilkiisa sidatan,
“Sannadkan 2015 waxaan bloggeyga ku qoray 99 warbixinood oo xambaarsan macluumaad kala duwan. Qormadeyda boqolaad ee 2015 waxaan u hibeeynayaa Allah ha u naxariistee Axmed Xasan Cawke.Saaxiibkey Cawke,Saaxiibkii Mikirifoonka
oo aan qoray 18 November, saaxiibbo ka faallooday ayaa sheegay in markii ay akhriyeen ay ilmeeyeen. Uguma talo gelin in aan cid ka ilmeysiiyo, laakiin waxaan isku dayay in aan soo bandhigo xusuus kooban oo ka mid ah wanaagga aan ku aqaannay Cawke.
Maalin ayaan ku kufay, ayuu yiri, meel London ka tiran oo fagaare ah. Aniga oo dhulka aalla, boorsadeydiina ay iga faniintay oo meel aan iga fogeyn ay taallo, ayaa waxaa isugu keey darsamay xanuun, welwel in aan jabay ama aan murxay aan ka qabo iyo ceebta nin weyn oo kufay. Waxaan arkay ayuu yiri haweeney Ingiriis ah oo i dul taagan.
Habeen aniga iyo Cawke aan wada soconnay xilli qabow ah, roob da’ayo ayuu socodkuna dhib ahaa siiba haddii aad ka hor imaaneyso dabayl waalan oo dhacaysay. Waxaan ka soo baxnay godka tareenka khadka dhexe ee Queensway ayaan ka soo baxnay. Waddada isla magacaas leg ee xaafadda Bayswater ayaan ku lugeynay. Dadka qof waliba isaga oo isa soo duudduubay, dallad sita haddii aan dabayshu ka jebin am aka bitin, madaxana hoos u dhigaya sidii in uu herdi u diyaargaroobayo ayuu socod boobayay si uu dhakhso ugu helo meel dugsi leh. Dadka qaar way ordayeen si ay dhakhso uga gudbaan roobka iyo dhaxanta.
Mararka qaar waxaa dhacaysa annaga oo Xafiiska fadhinna oo iska faraxsan ama sheekeynaya in uu telefoonka xafiisku uu mid shaqaalaha ka mid ah u soo dhaco. Waxaa laga soo wacayaa Soomaaliya ama meel kale oo Geeska Afrika ka tirsan. Qofkaas waxaa laga yaabaa in la weydiinayo lacag aanuu markaa diyaar la ahayn ama loo qabsado lacag uu hore u ballanqaaday laakiin uu diristeeda la daahay sabab kasta ha keentee.
Nin derbi jiif ah oo xeyraansan oo caaddaas maraya oo aan goobta la isugu soo baxay joogin ayaa waxaa soo gaaraya codka ka baxaya sameecadaha awoodda badan. Khudbaddii oo dhan ayuu maqlayaa. Ninka madaxda ahi wuxuu hadalkiisa ku soo gooyay – Soomaaliyeey toosa, toosa oo isku tiirsada.
Sida Cawke ii sheegay ninkii derbi jiifka ahaa bartiisa ayuu ka jawaabay: Anigu ninna ku tiirsan maayo. Laakiin kii igu sii tiirsada, wallee waxbaa na kala raaci doona.
Magaalada Hargeysa, niman duuliyayaal ah oo militeri ah ayaa waxay habeenkii la haasaawi jireen gabdho. Mid ka mid ah, oo istus ah ayaa intaa wuxuu gabdhaha ku yiraahdaa garbaha ayaa i xanuunaya ama oof baa igu taagan iwm. Maxaa kugu dhacay marka la weydiiyana wuxuu ku jawaabaa, maanta oo dhan ayaan dayaarad duulinayay. Mararka qaar wuxuu u dhigaa hadalka sidii aan maanta oo dhan dayaarad u duulinayay ayay garbuhu i xanuunayaan.
Waxay taasi i xusuusisay saaxiibkeeygii kale ee isaguna qaaliga ahaa Gaarriye AUN oo maalmo uu London joogay aan dhowr jeer is raacnay. Maaalin ayuu i soo wacay aniga oo shaqada ku jira oo aad u mashquulsan. Telefoonkeygu mar kasta wuxuu ahaa, welina yahay ma yeere maaddaama aan stuudiye toos hawada ugu jira iyo shirar uu shaqo maalmeedkeygu u badnaa. Marki dambe Gaarriye wuxuu ii soo diray farriin af Ingiriis ku qoran: Keep ignoring me, I will keep calling you. Weligaaba igu dhegeyso telefoonka, aniguna intaa waan ku soo wici doonaa.
Waxay Cawke ka reebteen saxiixiisa, ka dibna wuxuu u sheegay in aan anigu la socdo, wuxuuna u soo horkacay in aan aniguna saxiixa u reebo dhallinyarada.